Q: मेरो आईटमहरू कहाँ बाट पठाइएको छ?
कुनै पनि उत्पादनहरू जस्तै जुत्ता, झोला, एशियाबाट पठाइन्छ। जे होस् हाम्रा उत्पादनहरू एशियाबाट आएका छन्, गुणवत्ता उत्कृष्ट छ, हाम्रो शिपिंग समय प्रतिस्पर्धी हो र हाम्रो मूल्य निर्वाहनीय छ।
अन्य सबै उत्पादनहरू जस्तै मुद्रित कपडा (टी-शर्टहरू, स्वेटरहरू, हुडिहरू, फोन केसहरू, आदि) मा हाम्रो आपूर्तिकर्ताबाट सिधा पठाइन्छ संयुक्त राज्य अमेरिका.
हाम्रो कस्टम मुद्रित वस्तुहरू पठाइन्छ EMS एक्सप्रेस!
प्रश्न: मेरो अर्डरहरूमा अनुमानित डेलिभरी समयहरू के हुन्?
मुख्य उत्पादनहरू (टी-शर्ट्स, स्वेटशर्ट्स, हूडिज, ज्याकेट, टोपी, माउथ मास्क, ब्याकप्याक्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंगहरू, फोन केसहरू)
उत्पादन समय: २--2 दिन
अमेरिका, बेलायत, CA, AUS डेलिभरी समय अनुमान: १२-२12 दिन (ईएमएस गन्तव्य ट्र्याकिंगको साथ)
अमेरिका, ब्रिटेन, CA, AUS मुख्य उत्पाद आदेशहरू जुन processing० दिनको आदेश प्रसंस्करणको भित्र आइसकेका छैनन् रकम फिर्ताको लागि वा नि: शुल्क पुनःपूर्तिको लागि योग्य छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय डेलिभरी समय अनुमान: २--2 हप्ता (अन्तिम गन्तव्य ट्र्याकिंग समावेश गर्दैन)
अर्डर प्रोसेसिंगको days० दिन भित्र नपुगेका अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू फिर्ती वा नि: शुल्क पुनःस्थापनाको लागि योग्य छन्।
वितरण समय अनुमान: १०-१-10 दिन (गन्तव्य ट्र्याकिंगको साथ DHL)
अर्डर प्रशोधनको days order दिन भित्र नपुगेका कुनै तकिया अर्डरहरू रकम फिर्ताको लागि वा नि: शुल्क पुनःस्थापनाको लागि योग्य हुन्छन्।
कपड़ा ढोका ब्यागहरू
कुनै कपडा ढोका आदेशहरू जुन processing 45 दिन भित्र आउँदैनन् अर्डर प्रसंस्करणको रकम फिर्ताको लागि वा नि: शुल्क पुनःसहाईको लागि योग्य हुन्छन्।
अमेरिका, बेलायत, CA, AUS डेलिभरी समय अनुमान: १०-२10 दिन (गन्तव्य ट्र्याकिंगको साथ EMS)
अमेरिका, ब्रिटेन, CA, AUS चालक दल मोजा अर्डरहरू जुन processing order दिन भित्र आउँदैनन् अर्डर प्रसंस्करणको ref 45 दिन भित्र रिफन्ड वा नि: शुल्क पुनःपूर्तिको लागि योग्य हुन्छन्।
अर्डर प्रोसेसिंगको days० दिन भित्र नपुगेको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीका मोजा अर्डरहरू फिर्ताको लागि वा नि: शुल्क पुनःस्थापनाको लागि योग्य छन्।
छाला ढोका ब्याग र ह्यान्डब्यागहरू
उत्पादन समय: २--4 दिन
कुनै पनि ब्याग अर्डरहरू जुन processing 45 दिन भित्र आउँदैनन् अर्डर प्रसंस्करणको ref XNUMX दिन भित्र रिफन्ड वा नि: शुल्क पुनःभसनको लागि योग्य हुन्छन्।
क्यानभास काठी बैगहरू
उत्पादन समय: २--5 दिन
कुनै पनि जूता अर्डर प्रोसेसिंग को 45 XNUMX दिन भित्र नपुगेका आदेशहरू रकम फिर्ताको लागि वा नि: शुल्क पुनःस्थापनाको लागि योग्य छन्।
प्रश्न: मैले मेरो अर्डर (हरू) मा ट्र्याकिंग जानकारी कहिले प्राप्त गर्नेछु?
ट्र्याकि numbers नम्बरहरू तल निर्दिष्ट समय फ्रेम भित्र उपलब्ध हुनेछन् र स्वचालित रूपमा ग्राहकहरू लाई उनीहरूको अर्डरमा प्रदान गरिएको ईमेल मार्फत पठाइनेछ।
तकिया कभरहरू: processing-5 दिन आदेश प्रक्रिया पछि।
कपड़ा ढोका ब्याग: processing-5 दिन आदेश प्रक्रिया पछि।
क्रू मोजा: processing-5 दिन आदेश प्रक्रिया पछि।
छाला ढोका ब्याग: -7-१० दिनपछि अर्डर प्रशोधन पछि।
शोल्डर ह्यान्डब्याग: -7-१० दिनपछि अर्डर प्रशोधन पछि।
क्यानभास काठी बैग: -7-१० दिन आदेश प्रक्रिया पछि।
क्यानभास जुत्ता: -7-१० दिन आदेश प्रसंस्करण पछि।
अन्य: processing-5 दिन आदेश प्रक्रिया पछि।
प्रश्न: किन ट्र्याकिंग डाटा मेरो ट्र्याकिंग नम्बर मा देखाइरहेको छैन?
अमेरिकी अर्डरहरूको लागि ट्र्याकि numbers नम्बरहरू देखाउन days दिन सम्म लिन सक्दछ जब डाटा देखाउन ट्र्याकिंगको लागि अर्डर संसाधित भएपछि। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि ट्र्याकिंग वेबसाइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन हो www.17track.net/en.
अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूको लागि ट्र्याकि numbers नम्बरहरू देखाउन १० दिन सम्म लिन सक्दछ डाटा ट्र्याकिंग डाटा देखाउन अर्डर प्रक्रिया गरेपछि। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सहि ट्र्याकिंग वेबसाइट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ जुन हो www.17track.net/en। सुझाव दिनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू एक पटक पठाइएको र फिर्ती योग्य छैन र गन्तव्य वितरण डाटा देखाउँदैन।
Q: म एक अर्डर परिवर्तन गर्न / रद्द गर्न चाहन्छु, म यो कसरी गर्ने?
हामी an मा काम गर्दछौं सबै बिक्री अन्तिम नीति हो। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ रद्द गर्न, फिर्ता गर्न वा अर्डरको लागि फिर्ती प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म यो हाम्रो अन्तमा त्रुटि हुँदैन।
तपाईं हाम्रो फिर्ती नीति को बारे मा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
Q: म जुत्ता आकार र फिटसँग खुसी छैन। मैले के गर्नुपर्छ?
दुर्लभ घटनामा जब ग्राहक आफ्नो जुत्ताको फिटबाट दुखी हुन्छन्, हामी ग्राहकका लागि एक पटक निःशुल्क निःशुल्क एक्सचेन्ज गर्नेछौं।
फिटिंग रकम फिर्ता हुने छैन विवादलाई आकार दिनका लागि मात्र एक्सचेन्जलाई अनुमति छ।
निःशुल्क एक्सचेन्जहरू प्रति जुत्ता अर्डरको लागि मात्र अनुमति दिइनेछ। पहिलो नि: शुल्क विनिमय पछि आदानप्रदान सम्बन्धित कुनै पनि लागत ग्राहकले कभर गर्नुपर्दछ।
फ्रि एक्सचेन्जको प्रशोधन गर्नको लागि, ग्राहकहरूले निम्न जानकारी प्रदान गर्नुपर्दछ:
जुत्ता फिट नभएको एक कारण (जस्तै धेरै सानो, धेरै ठूलो, धेरै नै साँघुरो)
नयाँ आकार ग्राहक द्वारा अनुरोध गरीएको
ग्राहक नाम र अर्डर नम्बर
यस नीति अन्तर्गत फ्रि एक्सचेन्ज प्राप्त गर्न तपाईले मूल जुत्ता फिर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन।
मुद्दाहरू sizing को जोखिम कम गर्न, हामी हाम्रो उत्पाद विनिर्देश पृष्ठहरूको लागि साइजिंग चार्ट प्रदान गर्दछौं क्यानभास जुत्ता, साबर जुत्ता.
आकार आदान प्रदान अनुरोधहरू जुन अर्डर गरिएको मूल आकार भन्दा २ आकार भन्दा भिन्न हुन्छ ग्राहक-इनपुट त्रुटि मानिनेछ र एक्सचेन्जको लागि योग्य हुनेछैन।
Q: यसले मेरो ठेगाना फेला परेन भन्छ
A: हामी संयुक्त राज्य पोष्ट अफिसको प्रयोग गरेर पठाउँदछौं। यदि तपाईंसँग पीओ बक्स छ र तपाईंको भौतिक ठेगानामा मेल प्राप्त गर्नुहुन्न भने तपाईंले पीओ बक्स प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रमाणिकरण विशिष्ट संक्षिप्त रूपमा पनि मुश्किल हुन सक्छ। USPS.com "जिप कोड फेला पार्नुहोस्" तपाइँलाई तपाइँको विशेष संक्षिप्त विवरण फेला पार्न मद्दत गर्दछ र कसरी USPS ले तपाइँको ठेगाना प्रमाणित गर्दछ।
Q: म तपाईंको शर्ट साइजिंग चार्ट बुझ्दिन।
उत्तर: यदि तपाईं अब आफ्नै स्वाभाविक शर्ट बाहिर राख्नुहुन्छ जुन आरामदायक छ र आस्तीनको मुनि मा मापन गर्नुहोस्, तपाईं हाम्रो चार्टमा धेरै नजिक फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। याद गर्नुहोस्, चार्टमा मापन शर्टको लागि हो, व्यक्ति होईन जुन यसलाई लगाउँदछ।
Q: म कसरी फर्काउने वा मेरो शर्ट एक्सचेंज गर्ने?
A: कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् समर्थन@thekdom.com र हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि समस्या के हो! हामी तपाईसँग काम गर्नेछौं मुद्दा सच्याउनका लागि। कृपया याद गर्नुहोस्, यी अनुकूलन मुद्रित शर्टहरू हुन्, अर्डर गर्नका लागि। एकचोटि छापिएपछि हामी तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्न सक्दैनौं वा तिनीहरूलाई स्टकमा फर्काउन सक्दैनौं। त्यसो भए, हामी तपाईंको कार्यको साथमा सन्तुष्ट छौं भन्ने निश्चित गर्न केहि काम गर्न कोसिस गर्नेछौं!
यदि फिर्ती वारन्ट गर्न निर्धारित गरिएको छ, हामी सकेसम्म चाँडो शर्टको मूल मूल्यको लागि फिर्ती प्रक्रिया गर्नेछौं। एक पटक हामीले तिनीहरूलाई जारी गरेपछि फिर्ता प्रक्रियामा सामान्यतया १- 1-3 व्यवसाय दिन लाग्छ। यदि तपाईं एक्सचेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फिर्ती शिपिंगका लागि भुक्तान जानकारी समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
Q: मेरो शर्ट डिजाइनको वरिपरि एक बेहोश रूपरेखा छ।
A: केही शर्टहरू प्रिन्ट गर्नु अघि प्रि-ट्रीटमेन्ट गरिन्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, यो तपाईं शर्ट धोउँदा पहिलो पटक हराउनेछ।
Q: तपाईंले मेरो अर्डरमा गल्ती गर्नुभयो। समाधान के हो?
A: हामी धेरै माफी चाहन्छौं। यो प्रायः हुँदैन, तर कोही पनि पूर्ण हुँदैन। ईमेल समर्थन@thekdom.com र हामी तपाईसँग मिलेर काम गरुन छौं यसलाई सच्चा बनाउन। प्राय: यसको आवश्यकता पर्दछ कि तपाईले हामीलाई गरेको त्रुटिको तस्वीर हामीलाई पठाउन आवश्यक पर्दछ त्यसैले हामी a) तपाईंको दावी प्रमाणित गर्न सक्नेछौं र b) तपाईंलाई सच्याउन कल गर्नुहोस्।
Q: मैले २+ आईटमहरू अर्डर गरें, तर केवल एउटा मात्र प्राप्त भयो ... मेरो अर्डर कहाँ छ?
हामीसँग स्टकमा नभएको उत्पादनहरूको ठूलो वर्गीकरण छ घर। त्यसोभए, जब तपाईं एक पटकमा धेरै वस्तुहरू अर्डर गर्नुहुन्छ, तिनीहरू छुट्टै पठाइन्छन् ताकि तिनीहरू तपाईंलाई द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछन्। अर्कोको अगाडि तपाईले एउटा आईटम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले कृपया यदि तपाई आफ्ना सबै वस्तुहरू एकैचोटि प्राप्त गर्नुहुन्न भने कृपया नडराउनुहोस्, मात्र याद गर्नुहोस् कि तिनीहरू बाटोमा छन्!
Q: मलाई यो वेबसाइट सुरक्षित छ भनेर कसरी थाहा छ?
हामी शिपिफाई, एक प्रसिद्ध ई-कमर्स प्लेटफर्म द्वारा सुरक्षित छ। साथै, हामी एक सुरक्षित र सुरक्षित चेकआउट ग्यारेन्टी गर्दछौं। तलको छविमा देखाईएका प्रमुख कार्ड कम्पनीहरूमार्फत शपफिफ मार्फत भुक्तानी प्रशोधन गरिन्छ। हामीसँग तपाईं वा तपाईंको कार्डको बारेमा कुनै जानकारीको पहुँच छैन।